Ataköy İkitelli Metro waxaa loo adeegsan doonaa sanadka 2021 | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulAtaköy İkitelli Metro waxaa la bilaabi doonaa sanadka 2021
20 / 05 / 2020 34 Istanbul, tareenka, SAWIRADA, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Gobolka Marmara, Metro, TURKEY
tareenka 'isakoy ikitelli' ayaa la isticmaali doonaa
Ekrem İmamoğlu, Duqa Magaalada Caasimadda Istambul (IMM), wuxuu ka qeybgalay xaflad tareen oo loogu tala galay Ataköy-İkitelli Metro, kaas oo lagu biirin doono qadka 4-metro ee kaladuwan ee ka shaqeeya magaalada iyo Marmaray. Isagoo ka hadlayey tunnel-ka ka dib dhacdada lagu qabtay İkitelli Sanayi Metro Station, ğmamoğlu wuxuu sheegay in xariiqa uu bilaabi doono inuu u adeego qaybo ka mid ah sanadka 2021, “Qeybta koowaad ee sanadka 2022, waxaan rajeynayaa in qadkaan loo adeegsan doono shacabka Istanbul sidii khad muhiim u ah Marmaray. Waan guuleysan doonnaa. ”
Ekrem İmamoğlu, Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Magaalada Istanbul (İBB), ayaa ka qaybgalay xafladdii tareenka ee loogu talagalay Ataköy-İkitelli Metro, oo lagu biirin doono 5 xarumood oo metro metro oo magaalada ka shaqeeya. İmamoğlu wuxuu ka qeybgalay xaflada lagu qabtay İkitelli Sanayi Metro Station ee ku taal Başakşehir-Olimpiyat-Kirazlı Metro Line iyo lataliyaha madaxweynaha andBB SözcüSü Murat Ongun, Metro Inc. Maareeyaha guud Özgür Soy iyo İBB Rail Systems Director madaxa Pelin Alpkökin ayaa la socday. Iridda dib loo miro, Imamoglu wuxuu ka helay macluumaad ku saabsan shaqooyinka Alpkökin iyo mas'uuliyiinta shirkadda qandaraasleyda. İmamoğlu, oo sameeyay alxanka tareenka isaga oo xiraya galoofyo iyo muraayadaha qaaska ah, wuxuu qiimeyntan ka sameeyay khadka toorta. Imamoglu wuxuu yiri:
“WAAN KU NAHAY INAAD NAGU SAMEEATO”
Waxaan jecel nahay qoto dheer. Sababta oo ah hadda waxay ka dhigan tahay in shaqadu dhammaatay. Waxaan sidoo kale ku faraxsanahay. Waxay ka dhigan tahay in waddadu tahay kalabar, xitaa in ku dhow in la soo afjaro. Khadkeena Ataköy-İkitelli, oo aan ku suganahay munaasabad alxanka tareenka maanta, waa qadka qiimo inoo leh. Gaar ahaan joogsiga 'İkitelli stop' oo aan hadda isku xirno, waxaan isku xireynaa labada xarumood, iyo iyadoo 3-da saldhig ee halkan ku yaal, waxaan rajeynayaa inaan hirgalin doono sannadka soo socda. Waxaan danaynaynaa dhinacan. Waxaan ku jirnaa daraasad degdeg ah. Waxay qaadi doontaa 36 kun oo rakaab ah hal jiho. Meelaha mashquulka badan, gaar ahaan shaqaalaheenna shaqada ayaa aad u badan. Sidaa darteed, kani wuxuu noqon doonaa xariiq wax ku ool ah. Waxaa jiray dhibaatooyin dhulka ah; laakiin halkan labadayda asxaabteyda iyo shirkada qandaraasleyda ahba waxay sameeyeen geedi socod aad u adag waxaanan ka gudubnay dhibaatooyinka la xiriira dhulkaas. Mashiinka caajis ee tunnel-ka (TBM) wuxuu gutaa waajibaadkiisii ​​ugu dambeeyay ee qadkaan; Wuxuu dhamaan doonaa dhamaadka bisha June. Intaa kadib, waxaan diirada saari doonaa howlaha elektaronikada. Dhinacyadan oo dhan, waxaan ku dhaqaajinaa howsha iyadoo la raacayo shuruudaha maalgelinta ee shirkada qandaraasleyda, halkaas oo aan si wax ku ool ah ugu hawl galno oo aan u socono wadada, iyo aaminaadda asxaabtayda safarka ee hawshaan. Guddi hoosaad ayaa sidoo kale bixin doonta dhiirigelin gooni ah halkan. Saddexdii bilood ee hore ee 2022, waxaan rajeynayaa in markaan qadkaan wada shaqeyneynay, inaan la imaan laheyn xariiq muhiim ah oo sidoo kale ku xiran Marmaray dadka Istanbul sida İBB. ”
Waxaa jiri doona 5 saldhig oo ka gudbi doona 11 degmo
Marka Ataköy-Basın Ekspress-İkitelli Metro Line la dhammeeyo, oo leh qaybta Warshadaha Olambikada-Ikitelli ee Başakşehir-Olimpiyat-Kirazlı Metro Line ee Industrialkitelli Station Station; Mehmet Akif Station Kabataş-Mahmutbey-Esenyurt Metro Line; Yenikapı-Kirazlı- Xarunta Mimar Sinan StationHalkalı Waxaa lagu rakibi doonaa khadka 'Metro Line' iyo Marmaray Line ee Ataköy Station. Safka dhererkiisu yahay 13,5 kiiloomitir; Xadka xuduudaha ee Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece iyo Başakşehir waxaa ku jiri doona 11 saldhig. Waqtiga safarka ee khadka, oo qaadi doona 36 kun oo rakaab ah hal jiho saacaddii, waxay noqon doontaa 23 daqiiqo laga bilaabo saldhigga ugu horreeya iyo saldhiga ugu dambeeya.
Atakoy-Ikitelli metro waxay qarashgareyn doontaa 850 million liras
Adeegyada la talinta ee Ataköy - Basın Ekspres - İkitelli Mashruuca Khadka Tareenka…
Ataköy - Basın Ekspres - İkitelli Mashruuca Mashruuca Line Line iyo dhismayaasha korantada…
Ogeysiiska Qandaraaska: Dhismaha iyo Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Metro ee Ikitelli-Atakoy
İkitelli - Ataköy Metro Line Mashruuca Dhismaha iyo kontroll shaqooyinka elektaroonigga ah
Ikitelli-Atakoyol iyo khadadka tareenka ee Dudullu-Bostane ayaa ku jira hindise
İkitelli - Ataköy Metro Line Mashruuca Dhismaha iyo shaqooyinka elektaroonigga ah…
Ikitelli-Atakoyoy iyo khadadka metro-Dudullu-Bostancı ayaa shaqo bilaabay
İkitelli - Ataköy Metro Line Mashruuca Dhismaha iyo kormeerka shaqooyinka elektaroonigga ah…
Ikitelli - Dhismaha mashruuca xariiqa khadaka mitirka ee Ataköy iyo shaqada elektromechanical…
KİK, İkitelli - Ataköy Metro Line Mashruuca Diidmada natiijada hindisada ayaa ah mid kale…
Stationkitelli Station Station
xaflad ray loo qabanayo
Saacadaha Safarka Arifiye YHT
Natiijada Ugaarsiga Tartanka Ikitelli Ataköy Metro Line
Atakoy-Ikitelli line line la sameeyo deynta dibadda
Constructionkitelli- Dhismaha Mashruuca Dhismaha Ataköy iyo Kormeerka Shaqooyinka Elektromechanical,…
Xariiqda mitirka ee Ataköy İkitelli ee Heerka EIA
Sii-daynta Deg-degga ah ayaa laga bilaabay İkitelli Ataköy Metro Line